NepalManch :: यही सिस्टमले न्यायालयमा धेरै चोलेन्द्रहरु भित्र्याइसकेको छ
न्यायालयप्रति जनआस्थाको सवाल आवरणबाट हेर्ने कि भित्री तहबाट हेर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले कुनै ‘क्लाइन्ट’ वकिलकहाँ जान्छ, वकिललाई उसले मेरो मुद्दा कस्तो छ, के छ, कानुनको नजीर के छ भनी सोध्दैन। उसले त तपाईंको न्यायाधीशहरुसँग कस्तो सम्बन्ध छ भनी सोध्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न के गर्छ भने अलिअलि खर्च नगरिकन त जितिँदैन रे, कति खर्च गर्नुपर्छ? बिचौलियाहरुसँग तपाईको कस्तो सम्पर्क छ?
त्यसैले यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। म अन्यायमा परेको छु, कानुनमा मेरो साथमा छ, मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त? यो महत्वपूर्ण सवाल हो।
मर्कामा परेका अन्य सेवाग्राहीलाई सोध्नुस् न, यस्तै उत्तर आउँछ। त्यसकारण अहिले अदालतको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई जुन दुःख भयो, त्यसलाई मैले एउटा प्रश्रव वेदनाका रुपमा लिएको छु। यसपछि एउटा शिशु पक्कै जन्मिन्छ, शिशु जन्मिएपछि सबै परिवार खुसी हुन्छन्। तसर्थ, सेवाग्राहीले तत्काल आफू मर्कामा परेको हेर्ने कि छोराछोरी, नातिनातिनालाई पनि पछि सुखको दिन दिने? न्यायापालिकाप्रति आस्था बढाउने खालको वातावरण सिर्जना हुनु त राम्रो हो नि। केही समय पीडा हुन्छ, केही समय त सहनैपर्छ। अप्रेसन गर्नुअघि दुख्छ, बेहोस बनाइन्छ, अप्रेसन सफल भएपछि रोग त जान्छ नि। यो त रोगको निदानका लागि बाध्यतावश चालिएको कदम पनि हो।
निकास कसरी आउँछ?>
अब यसरी घिसिपिटीले न्यायालय चल्दैन। अब दलहरुले यसको निकास निकाल्न सहमतिले लागेनन् भने के बुझ्नुपर्छ भने तिनीहरुले पहिले उहाँसँग फाइदा लिए र अझै पनि फाइदा लिन चाहन्छन्। दलहरुले मौनता साँधे भने आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई भन्ने मौका पाउँछन्। दलहरुले किन वकिलहरुलाई किन अविश्वास गरेको हुन् त? हिजो वकिलहरुले नै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न मद्दत गरेका हुन्।
(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
यी हुन् सरकारका ६ महिनाका उपलब्धि (प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
कांग्रेसमा प्रभाव गुमाउँदै निधि, संकटतर्फ राजनीतिक भविष्य
जनकपुरको रेल किन भयो फेल ?
कोरोना प्रभाव : राजनीतिमा महिलाले व्यहोरेको क्षति